Ịmụ Baịbụl Ga-eme Ka Ị Mata Uru Alaeze Chineke Baara Gị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | OLEE URU ALAEZE CHINEKE GA-ABARA GỊ?
O nwere ike ịbụ na isiokwu ndị bu nke a ụzọ emeela ka ị ghọta na Ndịàmà Jehova ejighị Alaeze Chineke egwu egwu. O nwekwara ike ịbụ na obi dị gị ụtọ mgbe ị gụtara ihe ọma ndị Alaeze Chineke ga-emere ndị mmadụ n’ọdịnihu. Ma, i nwere ike ịna-eche ma ihe ọma ndị ahụ hà ga-eme eme n’eziokwu.
Ọ dị mma na ị na-echebara ihe ị gụrụ echiche tupu gị ekweta na ha niile bụ eziokwu. (Ilu 14:15) E nwere ike ikwu na ihe a i mere yiri ihe ndị Beria * oge ochie mere. Mgbe mbụ e ziri ha ozi ọma Alaeze Chineke, ha nabatara ya. Ma, ihe mere ha ji nabata ya abụghị naanị na ha chọrọ ka ihe ndị ha nụrụ mee, kama ọ bụ n’ihi na ha nyochara Akwụkwọ Nsọ nke ọma iji mara ‘ma ihe ndị ahụ hà bụ eziokwu.’ (Ọrụ Ndịozi 17:11) E nwere ike ikwu na ndị Beria gbalịrị ka ha mata ma ozi ọma e ziri ha ọ̀ dabara n’ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru. Ha mechara chọpụta na ozi ọma ahụ si n’Okwu Chineke n’eziokwu.
Ndịàmà Jehova na-agba gị ume ka i mee ihe ahụ ndị Beria mere. Ndịàmà Jehova na-akụziri ndị mmadụ Baịbụl n’efu. Ọ bụrụ na i kweta ka gị na ha mụwa Baịbụl, ị ga-achọpụta ma ihe Ndịàmà Jehova kweere gbasara Alaeze Chineke ọ̀ dabara n’ihe Baịbụl kwuru.
Uru ịmụ Baịbụl ga-abara gị abụghị naanị na ị ga-amụta banyere Alaeze Chineke, kama ị ga-amatakwa azịza ajụjụ ndị na-echu ndị mmadụ ụra.
Olee ebe anyị si bịa n’ụwa?
Gịnị mere anyị ji dịrị ndụ?
Gịnị mere Chineke ji kwe ka ndị mmadụ na-ata ahụhụ?
Ò nwere mgbe a ga-ebibi ụwa?
Olee ihe anyị ga-eme ka ezinụlọ anyị na-enwe obi ụtọ?
Nke ka nke bụ na ịmụ Baịbụl ga-eme ka ị ‘bịaruo Chineke nsọ.’ (Jems 4:8) Ọ bụrụ na gị na Chineke ana-adịkwu ná mma, ị ga-amata uru Alaeze Chineke baara gị ugbu a, matakwa na ọ ga-abara gị uru ruo mgbe ebighị ebi. Jizọs gwara Nna ya n’ekpere, sị: “Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst.”—Jọn 17:3.
^ para. 4 Obodo Beria dị na Masedonia oge ochie.
Ihe Mere Folake Ji Jiri Alaeze Chineke Kpọrọ Ihe
E nwere otu nwata nwaanyị dị afọ iri aha ya bụ Folake. N’oge na-adịchabeghị anya, a gwara ya n’ụlọ akwụkwọ ha ka o dee edemede isiokwu ya bụ “Ihe Kacha Amasị M n’Ụwa A.” Folake dere ihe mere ịkọrọ ndị ọzọ banyere Alaeze Chineke ji amasị ya.
O dere na “Alaeze Chineke bụ ọchịchị dị adị nke a na-anaghị ahụ anya. Ọ sọgodị gị kpuru enyo anya, ị gaghị ahụ ya.”
Folake dekwara ọtụtụ ihe ọma Alaeze ahụ ga-emere ụmụ mmadụ bụ́ ndị yanwa na-atụsi anya ha ike nakwa ụfọdụ nsogbu Alaeze ahụ ga-ewepụ. O dere, sị, “Ọ na-ewute m ma m hụ ndị na-enweghị ụlọ na-ehi n’okporo ụzọ” nakwa “ụmụaka ndị agụụ na-egbu n’ebe niile n’ụwa.” O dekwara, sị, “Ma, ọ na-abụ m gụọ ihe e dere n’Aịzaya 65:21, obi na-atọ m ụtọ.” Amaokwu ahụ kwuru ihe ọma Chineke ga-emere ndị Alaeze Chineke ga-achị. Ọ sịrị: “Ha ga-ewu ụlọ, biri n’ime ha; ha ga-akọkwa ubi vaịn, rie mkpụrụ ha.”
Folake dere na ya na-atụkwa anya mgbe Chineke ga-eji Alaeze ya wepụchaa ọrịa niile. N’edemede ahụ, o dere ihe e kwuru ná Mkpughe 21:4. Ebe ahụ sịrị na Chineke ga-ehichapụ “anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.” Mgbe Folake na-apịachi edemede ya, o dekwara ọzọ na ihe kacha amasị ya n’ụwa a bụ ịkọrọ ndị mmadụ banyere Jehova na Alaeze ya. N’eziokwu, nwata nwaanyị a ji Alaeze Chineke kpọrọ ihe.